Ajende cusub oo lagu soo daray kulanka Gollaha Shacabka | KEYDMEDIA ONLINE
Ajende cusub oo lagu soo daray kulanka Gollaha Shacabka
Waxaa lagu soo daray ajendaha sharciga Qaxootiga oo aan ku jirin kulankii Sabtida ee fashilka ku dhamaaday.
MUQDISHO, Soomaaliya - Waxaa lagu wadaa in Maanta Xildhibaanada Gollaha Shacabka isagu yimaadaan kulan qasoomidiisa walaac xooggan abuuray, kaasoo ajende cusub lagu soo daray.
"Mudane Xildhibaan Berri oo Arbaca ah oo ay Tar 31 March, waxaa jira Kulan weynihii Golaha Shacabka wuxuuna Agendaha yahay 1. Covid19, 2. U Codeyn Laba Xubnood oo Guddiga M/B ee Xuduudaha, 3. U Codeyn Sharciga Qaxootiga Qaranka, Saacadu waa 09:00 subaxnimo," ayaa lagu yiri fariinta loo diray Xildhibaanada xalay.
Waxaa ku cusub ajendaha midka sharciga Qaxootiga, oo aan la sheegin sababta loogu soo daray, maadaama kulankii fowdada ku dhamaaday ee Sabtidiid lasoo dhaafay aan ku jirin.
Mursal ayaa marwalba laga filan karaa inuu bedelo ajendiyaashan, oo kusoo dhex qariyo midka mudo-korarsiga Farmaajo, oo khilaaf iyo muran badan ka dhex abuuray Gollaha Shacabka, iyadoo Xildhibaanadii ka hor yimid qorshahan laga joojiyay kulamada.
Xildhibaanada mucaaradka oo gaaraya 15 ayaa wacad ku maray inay tagaan Kulanka Maanta, wixii ka dhacana uu mas'uuliyadeeda si shaqsi ah u qaadayo Mursal oo ogolaadey in Ciidamo dharcad ah, oo asal ahaan Al-Shabaab kasoo baxay ay la wareegeen amaanka xarunta Villa Hargeysa.
Walaaca dadka Muqdisho ku nool ay qabaan ayaa ah inuu dagaal dhaco, maadaama la isku hub aruursaday oo dhinacyada khilaafkooda marba marka ka dambeysa uu cirka isku shareeraayo.